Innosys Admin – InnoSys
Author: Innosys Admin
In November 2020, Innovative Systems Company Limited and partners Group competed forapublic tender issued by the Ministry of Electricity and Energy to constructa66KVA electricity transmission line. This project is located in Kyaing Ton -Mine Khote- Mine Sat Region, Shan State, Myanmar. We are very glad and honored to share the news…
Let us introduce you to our Brainchild project. Our aim is to bealeading institution in Data Center & ICT solutions by integrating existing systems with new architectures as well as implementing new systems through our solutions, ever striving to deliver the best quality services on time while meeting customers’ expectations and industrial standards.…
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး(စွမ်းအင်) ဒေါက်တာထွန်းနိုင် နော်ဝေနိုင်ငံ Oil for Development Program ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော Data Management System နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး**********************************************************************************************နေပြည်တော်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ( ၁၈ )ရက် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး(စွမ်းအင်) ဒေါက်တာထွန်းနိုင် သည် နော်ဝေနိုင်ငံ Oil for Development Program ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော Data Management System အတွက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Project Director ဖြစ်သူ Mrs. Synnove Via နှင့်အဖွဲ့၊ Service Provider ဖြစ်သူ Innovative Systems Co., Ltd. မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား…
Myanmar Government has receivedaUS$100 million from the Word Bank for the Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project. The objective of the AIRBM Project is to help Myanmar develop the institutions and tools needed to enable informed decision making in the management of Myanmar’s water resources and to implement integrated river basin management of…
(Tier III Uptime Certified Data Center Launching soon in Yangon) Responsibilities: • All data center service operation and customer contact • 24 hours support new data center service operation in Data Center. Data Center General Operation: • Performs maintenance and service repairs on critical Data Center systems (TR,UPS,PDU, Diesel Generators, ATS, Equipment and Building Controls,…
Job Vacancy for Network Operator (6 Positions)
(Tier III Uptime Certified Data Center Launching soon in Yangon) Responsibilities: • All data center service operation and customer contact • 24 hours support new data center service operation in Data Center. Data Center General Operation: • DC entrance management, card key management, Rack key management, rent DC equipments, carry in/out, receiving service, escort service.…
DC & Innovation Center Presentation Event at NPT City Hall
Innovative System Co.,Ltd မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Data Center & Innovation Center တည်ဆောက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော် မြို့တော်ခန်းမရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ကော်မတီဝင် ဦးမင်းသူ၊ကော်မတီဝင် ဦးဆန်းနိုင် ၊အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊e-Government ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဆွေ၊ e-Government ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးရဲကျော်သိန်း၊ဌာနကြီးမှူး ဦးမင်းမင်းဇော်၊ဦးစိုးဟန် နှင့် ဌာနမှူးများ၊တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။ရှေးဦးစွာ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ကော်မတီဝင် ဦးမင်းသူ မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။ထို့နောက် Innovative System Co.,Ltd မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Data Center & Innovation Center တည်ဆောက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်…